ဆန်ချိုအတွက် ပေါင်သန်း ၅၀ ထက်ပိုမပေးမယ့် မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် – Myan Ball
MyanBall is favourite news and entertainment website.
ဆန်ချိုအတွက် ပေါင်သန်း ၅၀ ထက်ပိုမပေးမယ့် မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာ တောင်ပံတိုက်စစ်ကစားသမား ဆန်ချိုအတွက် ပေါင်သန်း ၅၀ ထက်ပိုမပေးဘူးလို့ ဒေါ့မွန်အသင်းကို ပြောခဲ့တယ်လို့ သတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ (၂) ရာသီမှာ ဒေါ့မွန်အသင်းအတွက် သွင်းဂိုး နဲ့ ဖန်တီးမှု စုစုပေါင်း (၅၉) ဂိုးအထိ စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်ကစားသမားကို ကာလရှည် စိတ်ဝင်စားလာတာဖြစ်ပါတယ်။
ဆန်ချိုဟာ စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးရန် နောက်ထပ် နှစ်အနည်းငယ်ကျန်သေးပြီး ဒေါ့မွန်အသင်းကလည်း သူ့ကို ဈေးပေါပေါနဲ့ ရောင်းသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ယူနိုက်တက်အသင်းအနေနဲ့ ဒီနွေရာသီမှာ သူတို့အလိုချင်ဆုံး ပစ်မှတ်အတွက် ပေါင်သန်း ၁၀၀ ပေးရမှာ ဖြစ်ပေမယ့် စကိုင်းစပေါ့သတင်းဌာနက အဆိုအရ ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အသ်းဟာ တစ်ဝက်ပဲ ပေးရန် ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
စပိန်လာလီဂါကလပ် ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် နဲ့ ဘာစီလိုနာအသင်းတို့ကလည်း ဂျာဒွန်ဆန်ချိုကို လက်မှတ်ထိုးခေါ်ယူရန် စိတ်ဝင်စားနေသော်လည်း (၂) သင်းစလုံးကလည်း ယူနိုက်တက်နည်းတူဖြစ်ပါတယ်။ယူနိုက်တက်နည်းပြ ဆိုးလ်ရှားဟာ အသက် ၂၀ အရွယ်ကစားသမားကို ခေါ်ယူလို့ မရနိုင်ရင် အက်စတွန်ဗီလာကွင်းလယ်ဖန်တီးရှင် ဂျက်ဂရီလစ်ရှ်ကို အရခေါ်ယူတော့မယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဆန္ခ်ိဳအတြက္ ေပါင္သန္း ၅၀ ထက္ပိုမေပးမယ့္ မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္
မန္ခ်က္စတာယူႏုိက္တက္အသင္းဟာ ေတာင္ပံတိုက္စစ္ကစားသမား ဆန္ခ်ိဳအတြက္ ေပါင္သန္း ၅၀ ထက္ပိုမေပးဘူးလို႔ ေဒါ့မြန္အသင္းကို ေျပာခဲ့တယ္လို႔ သတင္းထြက္ေပၚလာပါတယ္။ ယူႏုိိက္တက္အသင္းဟာ ဘြန္ဒက္စ္လီဂါ (၂) ရာသီမွာ ေဒါ့မြန္အသင္းအတြက္ သြင္းဂိုး နဲ႔ ဖန္တီးမႈ စုစုေပါင္း (၅၉) ဂိုးအထိ စြမ္းေဆာင္ေပးခဲ့တဲ့ အဂၤလန္လက္ေရြးစင္ကစားသမားကို ကာလရွည္ စိတ္၀င္စားလာတာျဖစ္ပါတယ္။
ဆန္ခ်ိဳဟာ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းကုန္ဆံုးရန္ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္အနည္းငယ္က်န္ေသးျပီး ေဒါ့မြန္အသင္းကလည္း သူ႔ကို ေစ်းေပါေပါနဲ႔ ေရာင္းသြားမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ယူႏိုက္တက္အသင္းအေနနဲ႔ ဒီေႏြရာသီမွာ သူတို႔အလိုခ်င္ဆံုး ပစ္မွတ္အတြက္ ေပါင္သန္း ၁၀၀ ေပးရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ စကိုင္းစေပါ့သတင္းဌာနက အဆိုအရ ပရီးမီးယားလိဂ္ကလပ္အသ္းဟာ တစ္၀က္ပဲ ေပးရန္ ျပင္ဆင္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
စပိန္လာလီဂါကလပ္ ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္ နဲ႔ ဘာစီလိုနာအသင္းတို႔ကလည္း ဂ်ာဒြန္ဆန္ခ်ိဳကို လက္မွတ္ထိုးေခၚယူရန္ စိတ္၀င္စားေနေသာ္လည္း (၂) သင္းစလံုးကလည္း ယူႏိုက္တက္နည္းတူျဖစ္ပါတယ္။ယူႏိုက္တက္နည္းျပ ဆိုးလ္ရွားဟာ အသက္ ၂၀ အရြယ္ကစားသမားကို ေခၚယူလို႔ မရႏိုင္ရင္ အက္စတြန္ဗီလာကြင္းလယ္ဖန္တီးရွင္ ဂ်က္ဂရီလစ္ရွ္ကို အရေခၚယူေတာ့မယ္လို႔ သိရပါတယ္။
အဲဗာတန် နဲ့ သရေကျခဲ့တဲ့ပွဲက ဒဏ်ရာကြောင့် ရာသီကုန်အထိ အနားယူရတော့မယ့် လီဗာပူးလ် နောက်ခံလူ မာတစ်ပ်
နောက်နှစ်အနည်းငယ်မှာ ချဲလ်ဆီးအသင်း ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားမရဘူးဆိုရင် အံ့အားသင့်ရမယ်လို့ ပြောဆိုလိုက်တဲ့ ပေါလ်မာဆင်
လူးကပ်စ်မော်ရာ ကို အသုံးချပြီး မီလစ်ခ် ကို ခေါ်ယူရန် စဉ်းစားနေတဲ့ စပါးအသင်း
စီးရီးအေကို ဘီနီဗန်တိုနဲ့ အတူပြန်လာနိုင်ခဲ့တဲ့ ဖိလစ်ပိုအင်ဇာဂီ
Other Football League
MyanBall is Myanmar’s favourite news, entertainment, lifestyle website. We provide you with the latest breaking news stories everyday.
Articles are displayed in text, video and photo. Visitors can read news in articles type of categories in https://www.myanball.com (example – News, Knowledge, Sport, Health, Celebrities and Lifestyle….etc).
Hope our visitors enjoy our website.
German Bundesliga Premier League
Italian Serie A Premier League
Copyright © 2020 Myan Ball